Lemon Beagle Dog Breed Information, Foto & Eziokwu - Dịrị
Lemon Beagle Dog Breed Information, Foto & Eziokwu
Anyị niile anụla banyere Snoopy, Beagle a ma ama bụ onye a hụrụ n'anya maka omume enyi ya, obi ụtọ na iguzosi ike n'ihe.
Mana ị nụtụla banyere otu Lemon Beagle?
Nkịta lemon a na-ekerịta àgwà niile mara mma nke mgbe niile nwere uwe nwere tan abụọ na-acha odo odo!
The lemon agba-mgbanwe enwewo uche nke nkịta hụrụ n'ụwa nile.
Ma olee ihe ọzọ ịmara banyere ụdị a?
N'isiokwu a, anyị ga-eso gị kerịta ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ọdịdị ha mara mma, akụkọ ihe mere eme, ụdị mmadụ na ebe ị ga - ahụ ụmụ nkịta ...
Gịnị Bụ Lemon Ugo?
Kennel Club amata na Pedigree
Ihe mere anyị ji hụ Lemon Beagles n'anya
Lemọn Beagle nwa nkita
Lemọn Beagles dị ụkọ?
Lemọn Beagle Agba na ọdịdị
Lemon Beagle Ọnọdụ
Nkịta Beagle Na-agba Ọsọ?
Ha Bụ Ezigbo Nkịta Ezinaụlọ?
Okwu Ahụike Ndị A Maara
Lemọn Beagle nwere uwe ọcha na lemon ọ na-adịkarị obere ịchọta.
Nkịta lemon a abụghị ihe dị iche na ya Beagle ọ bụla ọzọ . Ha bu ngbanwe di iche iche di iche.
Ekwenyere na ndị nna ochie Beagle nwere ike ịlaghachi England. Ejiri ha mere dinta-ichu nta oke ọhịa ma soro Deer.
N'ihi ikike ịchụ nta ha na omume ịhụnanya ha ghọrọ ngwa ngwa ezigbo enyi dinta na otu n'ime ngwaọrụ ịchụ nta kachasị mma. A na-ahọrọ nkịta a karịa ngwugwu ndị ọzọ n'ihi ntakịrị ha.
Nta a pere mpe pụtara na ọ dịrị ha mfe iji ụkwụ na-aga.
Mgbe agha obodo gasịrị, nkịta a mere ụzọ ya na States .
Ọdịmma ha n'etiti ndị dinta America rịrị elu ngwa ngwa n'ihi ọnọdụ ha maara nke ọma na omume ísìsì ha.
Na 1885, na Ugo nke Ugwu ka a nabatara n’ihu ọha site na American Kennel Club.
Nkịta a na-akpọ Blunder bụ nke mbụ Beagle ka e debanye aha na klọb.
Taa, ụdị a ka na-abụ a ewu ewu na-achụ nta a na-ejikwa ha dị ka nkịta na-achọpụta na 'Beagle Brigade' nke Ngalaba Ọrụ Ugbo nke United States.
N'ụzọ dị mwute, uto ha na-ewu ewu mere ka ha bụrụ ụdị nkịta kachasị eji eme ihe na Animal Testing.
A maara nkịta a mara mma maka omume enyi ha, nwee obi ụtọ, dị nwayọ ma nwekwa ezigbo agwa.
Ha jiri akwa dị ka ụdị nkwukọrịta.
Idebe na ilekọta Lemon Beagle bụ ọrụ dị mfe. Ha anaghị achọ nnukwu ejiji ma ọ bụ mmega ahụ ma mee nkịta nkịta ezinụlọ ka ha nwee mmekọrịta ziri ezi.
Ha dị oke ụkọ dị ka mgbanwe ụcha lemon dị n'ihi ngbanwe ngbanwe.
Bredị a bụ ama ama maka ogologo ntị ha na-ada ụda na ntị na-enye aka inye ha ụdị nkịta hound.
20 ruo 24 pound
13 ruo 16 sentimita asatọ
10 ruo 15 afọ
Nwa Lemon Beagle nwa nkịta na-egwu ahịhịa.
Ogologo mkpofu nke Lemon Beagle bụ ihe dị ka ụmụ nkịta 6 .
Otú ọ dị, ọ nweghị ụzọ isi gwa ole puppy ndị a ga-acha lemon dị ka ndị okenye.
Nke ahụ bụ n'ihi na a mụrụ ha kpamkpam na-acha ọcha. Agba agba ha abụọ na-acha uhie uhie na-amalite ịpụta n’ime izu ole na ole ma gbaa ọchịchịrị na afọ .
Gwọ nke Lemon Beagle bụ otu n'ime ihe ole na ole dị iche na nwanne ha na-acha odo odo. N'ihi ụkọ ha, ị nwere ike ịhụ puppy ndị a dị oke ọnụ.
Ná nkezi, ị nwere ike ịtụ anya ịkwụ ụgwọ ebe ọ bụla $ 500 ka $ 1,300 maka lemon beagle nwa nkita .
Mgbe ịzụrụ nwa nkita, echefula ichebara njiri mara nke onye na-azụ ha. Ezigbo ndị na-azụ anụ nwere ike ịbịaru nso, nwee obi ụtọ ịza ajụjụ, na-ekwusi ike na nleta ụlọ na nkwekọrịta ire ere.
Eeh. N'ihi na, e nweghị nkwa breeders ga-a lemon nwa nkita na-awụba n'oké osimiri, ha dị nnọọ obere. The lemon agba mgbanwe bụ n'ihi ka ọ na-agbanwe ntụgharị .
Nkịta Beagle adịghị abịa n'otu agba siri ike, kama ha na-abịa n'ụda abụọ ma ọ bụ agba atọ.
Ationsdị ọdịiche dị na njedebe dị iche iche dị na:
Tan na-acha ọcha
Uhie na ọcha
Oroma na-acha ọcha
Lemọn ọcha (lemon beagle)
N'agbanyeghị ụdị uwe ha, Beagles nwere ọdụ na-acha ọcha. Nke a na - eme ka ọ dịrị ndị dinta mfe ịchọta ha mgbe ha nọ n’ime ọhịa, a na - akpọkwa ya “ọkọlọtọ na-acha ọcha.”
Nkịta a nwere obere uwe ogologo, ogologo, akwa na mmiri. Uwe okpukpu abụọ ha na-enyere ha aka idi mmiri ozuzo.
Uwe Lemon Beagle bụ otu ihe ahụ dịka nwanne ha.
Ha abụghị ndị na-ebu ibu arọ ọ bụ ezie na ha na-agba ntakịrị na gburugburu afọ.
A na-ahazi Lemọn Beagle dị ka obere nkịta nkịta. Agbanyeghị, ịdị ukwuu karịa ndụ ha na-eme obere obere ha.
Enweghi oke dị iche na agba a na agba Beagles mgbe niile:
Mụ nwanyị dị ihe dịka 20 ruo 22lb.
Aremụ nwoke dị ntakịrị arọ na 22 ruo 24lb.
Dịka, Lemon Beagles na-eguzo na 13 ruo 16 sentimita n'ịdị elu.
Mamụ nwanyị dị mkpụmkpụ karịa ụmụ nwoke. Na mgbakwunye enwere n'akpa uwe dịgasị iche iche dị n'okpuru sentimita iri na atọ.
Ghọta ugo anaghị abụkarị ihe isi ike n'ihi ewu ewu ha. Otu obere ụdị nke nwere obere mọzụl na ọdịdị nke ọma bụ ụzọ kachasị mma isi kọwaa nkịta a.
Lemon Beagle nwere muzzle square, azụ dị mkpụmkpụ, na ọdụ jaunty nke ị ga-ahụ mgbe ị na-egwu ọ withụ.
Imi nke Lemọn Beagle na-abụkarị ọchịchịrị na pigmenti .
Theirkwụ ha na-adịkarị mkpụmkpụ karịa ahụ ha.
Bredị a bụ ama ama maka ntị dị ogologo na ntị dị gburugburu nke na-anọdụ n'akụkụ isi ha. Ntị ha na-enyere aka mee ka ha nwee ọdịdị anụ nkịta.
Ha nwere nnukwu gburugburu hazel na agba aja aja.
Na-eguzosi ike n'ihe
Nkịta a bụ ezigbo enyi na nwayọ. Ha na-achọkarị iso onye ọ bụla ha hụrụ na-emekọrịta ihe ozugbo.
Omume Lemon Beagle adịghị iche site na nwanne obula agba agba.
Ha na-egwuri egwu nke ukwuu mgbe oge ruru, mana ha nwekwara ike ịdị jụụ ma nwee obi ụtọ ịrapara ozugbo ha wepụtara ike ha maka ụbọchị ahụ.
Dị ka o kwesịrị ịdị, nkịta mara mma nke ọma, o kwesịghị ịbụ ihe ijuanya ịhụ nkịta a gosipụtara dị ka ezigbo enyi mmadụ .
Nke a bụ nwa nkita na-ahụ n'anya ịnọ n'etiti ezinụlọ.
Omume ha bu imeta onye obula enyi. Omume nchebe na oke ike na-apụtakarị na ụdị a.
Amaghi beagle ka o buru nkita.
Mana n'ihi na ha nwere ike ịmata ọdịiche dị n'etiti ọnọdụ egwu na nke na-adịghị eyi egwu, nkịta a ka ga-abụ nkịta nche dị egwu.
Amaghị ha ịbụ ndị na-ere ahịa, agbanyeghị na ha ga-eme ka ị mata mgbe mmadụ nọ n'ọnụ ụzọ ụlọ. Kama nke ahụ, ha na-ahọrọ ịkwa akwa.
N'ezie, omume ha na-ebe ákwá bụ ihe e bu pụta ụwa. Dịka e si jiri nkịta a achụ nta, ha jiri iti-mkpu dịka ụdị nkwukọrịta iji mee ka ndị ọzọ mara na ha ewerela isi.
Lingkwa ákwá bụ àgwà nke ha debere ka oge na-aga; Lemọn Beagles kwa.
Oké iti mkpu mgbe ụfọdụ nwere ike ịbụ ihe ịrịba ama nke nkewa nchegbu .
Ọ kachasị mma ịhapụ ịhapụ nkịta gị naanị maka ogologo oge. Mmekọrịta nkịta gị na ọzụzụ ọzụzụ nwere ike inye aka belata nkụda mmụọ.
Ihu nke Lemọn Beagle.
Eeh. Lemọn Beagle dakọtara na ọtụtụ ezinụlọ dị iche iche. I nwere ike ịtụ anya na ha na ezi-na-ụlọ ga-eme nke ọma.
Ha dị nwayọọ, nwee omume enyi, na-eguzosi ike n’ihe, nweekwa obi ụtọ.
Lemọn Beagles mara maka ịbụ ezigbo anụ ụlọ .
Mgbe ụfọdụ, ịchụpụ anụ ha nwere ike ime ka mmekọrịta ha na anụ ụlọ ndị ọzọ sie ike. Ọ na-amasị ha ịkwa ákwá ma na-achụ anụ ụlọ ndị bi n'otu ụlọ.
Enwere ike idozi agwa a mgbe ha ka bụ ụmụ nkịta, mana ọ ga-ewe oge, mmalite mmekọrịta mmekọrịta, na ndidi.
Nkịta na-elekọta mmadụ bụ n'ezie mpaghara ọzụzụ a ga-elekwasị anya na Beagle ọ bụla n'ihi agwa ha dị mma.
Lemọn Beagle na-ebute otu nsogbu ahụike ọ bụla nke Beagle bụ.
Ohaneze ha siri ezigbo ike mara na ọ ga-anọ n’agbata afọ iri na abụọ ruo afọ iri na ise.
Agbanyeghị, nkịta niile dị afọ dị iche iche dabere na ọtụtụ ihe (dịka nri, ọdịmma, mmega ahụ na gburugburu ebe obibi) ma nwee ike iche nsogbu ahụike na ndụ ha. Ihe kachasị bụrụ Patellar Luxation.
Patellar Luxation Ọ bụ nke a na-ahụkarị na obere nkịta ma bụrụ ọnọdụ ahụike ịmara.
Ọ na - apụta mgbe enwere ọghọm na nkwụsị nke ikpere nkịta. Nke a nwere ike ime n'ihi nsogbu ma ọ bụ mkpụrụ ndụ ihe nketa.
Nwere ike ịhụ nkịta gị nwere ụkwụ gbagoro elu na ikuku, n'agbanyeghị na nke a nwere ike ịdị mma n'anya ọ nwere ike bụrụ ihe kpatara nlekọta ahụike.
Patellar Luxation nwere ike na-egbu mgbu ma nwee ike ibute lameness; ọ chọrọ ọgwụgwọ ọrịa anụmanụ ozugbo enwere ike.
Ilekọta Lemon Beagle bụ ọrụ dị mfe. Ha bụ nkịta ezinụlọ dị ukwuu mgbe ha na-emekọrịta ihe ma zụọ ha n'ụzọ ziri ezi.
Omume egwuregwu ha na nke ịhụnanya ha na-eme ka ha nwee obi ụtọ ịnọ gburugburu ụbọchị niile.
Nke a bụ ntakịrị ntakịrị ozi gbasara otu esi elekọta ha ...
Nduzi ~ Kalori 600
Lemọn Beagle hụrụ ịchụ nta maka nri! Ya ejula gi anya ma oburu na ijide ha na-ezoro ezoro na ahihia gi ma obu ebe eji eri nri.
Ná nkezi, nkịta a chọrọ kalori 600 ruo 720 kwa ụbọchị. Agbanyeghị, ego a ga-adị iche dabere na afọ ha na ogo ọrụ ha ugbu a.
Nkịta niile na-achọ nri dị elu na protein, yana abụba ndị dị mkpa, vitamin na mineral. Carbohydrates adịghị mkpa na nri nkịta.
Anyị na-akwado inye nri nri dị mma .
Nke a ga - agba mbọ hụ na nri nkịta nkịta gị chọrọ kariri nke ọma ma na - eme nri ngwa ngwa ma dịkwa mfe.
Kwesiri inye nkịta gị nri otu ugboro abụọ kwa ụbọchị . Anyị agaghị akwado nri na-akwụghị ụgwọ na ụdị a. Mekọrịta nri n'ime nri ụtụtụ na nri abalị ga-enyere mgbaze nkịta gị aka ka ha wee ghara ịmịnye nri ha kwa ụbọchị n'otu oge.
Usoro ọgwụgwọ bụkwa akụkụ dị mkpa nke nri ha, ọkachasị ma a bịa n'ịkwado ezigbo omume na ọzụzụ.
Nkeji Nkeji 30
Mmega Ahụkarị Obere ọsọ
Lemọn Beagle bụ ahụ ike nke na-arụ ọrụ nke nkịta.
Ha nwere mmasị ịga ije, obere ịgba ọsọ, ma nwee obi ụtọ karịa igwu egwu!
Anyị na-akwado ịgagharị nkịta gị kwa ụbọchị . Enweghị mgbatị na mkpali, nkịta nwere ike ịgwụ ike na ike ọgwụgwụ.
N'ihi ntakịrị obere ha, a ga-eme ka nnọkọ cardio dị mkpụmkpụ ma pere mpe. Agbanyeghị, oge egwuru egwu na mbara ezi bụ ụzọ dị egwu iji gbanyụọ ike.
Leash ọzụzụ bụ ihe achọrọ maka hound.
Cheta, ụdị a nwere mmuta ịchụ nta (yabụ anụ oriri) ma ha dị mma na nsuso nsị. Nwere ike ịhụ Beagle gị ka ọ bụrụ obere isi ike mgbe a na-akpọ oku. Ha anaghị anwa inupụ isi, ha achọtala isi nke nwere ike bụrụ ihe na-atọ gị ụtọ karịa gị.
Bredị a abụghị ọgụgụ isi. Agbanyeghị, ha nwere nnwere onwe karịa ọtụtụ nkịta ma isi ike mgbe ụfọdụ.
N'ihi nke a ọzụzụ ọzụzụ kwesịrị ịbụ ihe na-atọ ụtọ ma dị mkpụmkpụ.
Oge ọzụzụ ogologo oge nwere ike ibute enweghị mmasị na enweghị nlebara anya.
Trainingzọ ọzụzụ nkwalite nkwalite dị mma bụ ụdị kachasị mma maka nkịta; nwee ndidi, too na ụgwọ ọrụ. O doro anya na Beagles bụ nkịta nkịta ka ha wee hụ gị n'anya na ọganihu ha.
Lemọn beagles dị nnọọ mma na enyi na enyi.
Ha na-achọ ka gị na ndị nkịta ndị ọzọ lebara gị anya, yabụ ịme nkịta nkịta gị dị ezigbo mkpa. Emere nke a kachasị mma n'ime ọnwa atọ mbụ nke ndụ ha.
Iso ndi mmadu eme bu ime ka nkita gi bata ndi mmadu ohuru, ebe na ihe di iche. Ya mere, nke a bu uzo di uku iji nye nkpali nke nkita gi aka.
Enweghi mmekorita nke onwe na nkata nke nkita gi nwere ike ichu oyi, nbibi na nnupu isi. Enwere ike inye mkpali nke uche site na egwuregwu na ọzụzụ aghụghọ . Anyị na-akwado ịkwado egwuregwu na nsuso egwuregwu n'ihi mmuta ịchụ nta ha.
Lemọn Beagles anaghị achọ akwa edozi, ha na-achọ ezigbo ahịhịa otu ugboro n'izu.
Ha anaghị achọ ịsa ahụ mgbe niile.
N'ezie, ịsa ahụ́ gabiga ókè pụrụ ịbụ ihe na-adịghị mma n'akpụkpọ ahụ ha ma kpatara dermatitis. Hingsa ahụ na-ekpuchi uwe nkịta gị nke mmanụ ya. Ya mere, anyị na-akwado ịsa ahụ ọnwa ole na ole ọ bụla ma ọ bụ ka achọrọ.
Dika Lemon Beagle kpuru uto, ọ dị mkpa iji chọpụta ma hichaa ntị ha kwa izu . Ntị na-ada ada na-adịkarị mfe ibute ọrịa ntị; mgbasa ozi ikuku na-adịghị mma na ntị ha na-eduga n'ịrụpụta ihe mkpofu achọghị.
Na-asa ezé nkịta gị a na-atụ aro mgbe niile , ma ọ bụghị mgbe niile bara uru!
Gbalịa ịsachasị ezé ha site na nwatakịrị ka nwa nkịta gị nwee ike itolita iji ya. Ma ọ bụghị ya, jiri ọgwụgwọ eze ma ọ bụ chew.
Beagle na-bụ nkịta na-elekọta mmadụ nke na-eme nnukwu enyi maka nkịta ndị ọzọ ma ọ bụ ụmụ mmadụ na mgbakwunye dị egwu na ezinụlọ ọ bụla
N'ihi obi ụtọ ha, ịdị nwayọọ, na iguzosi ike n'ihe ha, ha emeriwo n'obi ndị hụrụ nkịta n'anya n'ụwa niile.
Na oke ejiji na mmega ahụ chọrọ ya, yana obere ndidi na ọzụzụ (iji lụsie isi ike ike ha), Lemọn Beagle nwere ike ịme enyi dị mma.
Lemon a na-acha ọcha na-acha ọcha dị obere, mana na-enyere aka ịgbakwunye ịpụ iche na ụdị ịchụ nta pụrụ iche.
Gịnị bụ ọkacha mmasị gị Beagle agba? Gwa anyị n’okpuru.
Ndi American Boston Terrier niile bu ezigbo nkịta diri gi?
Pitbull Dachshund Mix: Ihe Knowmara Tupu yingzụ
onye Belgium onye ọzụzụ atụrụ nwa ụlọ nyocha
ehi ehi agwakọtara na ụlọ nyocha
ego ole bụ nkịta maltese na -akụzi
ole ụdị oke ehi dị iche iche dị